संविधान दिवसको अवसरमा नेपाल टेलिकमको अनलिमिटेड युट्युब र अनलिमिटेड फेसबुक प्याक - Technology Khabar
» संविधान दिवसको अवसरमा नेपाल टेलिकमको अनलिमिटेड युट्युब र अनलिमिटेड फेसबुक प्याक
नेपाल टेलिकमले संविधान दिवस (राष्ट्रिय दिवस) २०७७ को अवसरमा अनलिमिटेड युट्युब (Unlimited Youtube), अनलिमिटेड फेसबुक (Unlimited Facebook) र एड–अन प्याक (Ad-n Pack) उपलब्ध गराउन आवश्यक तयारी पुरा गरेको जानकारी दिएको छ ।
कम्पनीकाअनुसार यही असोज २, ३ र ४ गते अनलिमिटेड युट्युब तथा अनलिमिटेड फेसबुक प्याक छुट्टाछुट्टै रु. ५५ प्रति प्याकमा खरिद गरी खरिद गरिएको मितिबाट ३ दिनसम्म प्रयोग गर्न सकिनेछ ।
साथै, अनलिमिटेड युट्युब र अनलिमिटेड फेसबुक प्याकमध्ये कुनै एक प्याक खरिद गर्ने ग्राहकले एड–अन प्याकको रुपमा रु. १५ मा १ जीबी डाटा प्याक खरिद गरी डाटा प्रयोग गर्न सकिने सुविधा समेत उपलब्ध हुनेछ । यो प्याक पनि खरिद गरेको मितिबाट ३ दिनसम्म प्रयोग गर्न सकिनेछ।
हाल समर अफर अन्तर्गत २८ दिनको समयावधि हुने १ जीबी पर डे (1 GB per day) डाटा प्याक रु. ८५० मा उपलब्ध भइरहेकोमा संविधान दिवसको अवसरमा यसमा ३४.७ प्रतिशतको भारी छुट प्रदान गरिएको छ । सो अनुसार यो प्याक २०७७ असोज २, ३ र ४ गते जम्मा रु. ५५५ मा उपलब्ध हुने टेलिकमले जानकारी दिएको छ ।
संविधान दिवसका अवसरमा उपलब्ध गरिएका यी अफरहरु *1415*11# डायल गरी प्राप्त गर्न सकिनेछन् । साथै, ग्राहकवर्गको सहजताका लागि नेपाल टेलिकम एपबाट समेत यी प्याकहरु खरिद गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको कम्पनीले जनाएको छ ।
‘मेरो सेयर’ को एकाउन्ट नविकरण अब इसेवाबाट गर्न सकिने